PDF Southern Division 1st Batch (May 29/2021) – PVTV Myanmar
PDF Southern Division 1st Batch (May 29/2021)
· 8 months ago ·11 Comments
ZZ G Z G says:
2021-05-29 at 10:15 AM
အားရတာ အ ေရးေတာ်ပုံေအာင်ပြီ
2021-05-29 at 10:27 AM
နေနေညည မျှော်နေရတဲ့ ပြည်သူ့တပ်တော်သားများ ရုဏ်ယူဝင့်ကြွားများစွာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်
PV channelထုတ်လွှတ်တာ တရက်နောက်ကျတယ်
2021-05-29 at 1:02 PM
Zaw Win Htike says:
2021-05-29 at 3:27 PM
Myan Te says:
2021-05-29 at 3:43 PM
So proud of you all and you all are our "HOPE"*** and "HEROS"***
Way to Go>>>>>>>>>>>>>>>>SUPER!!!!
Myo Min Khaung says:
2021-05-29 at 4:08 PM
ဗိုလ်မှူးများ ဗိုလ်ချုပ်များ ဗိုလ်ကြီးများနဲ့ တပ်မတော်သားများအားလုံးတို့၊ မန္တလေးမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြဘို့လုပ်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ကားနဲ့တိုက်ပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ပြောတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်ရေးဆိုပြီး လက်တွေ့မှာတော့ ကိုယ့်အမျိုး ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုသတ်၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို စော်ကားမော်ကား ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးနဲ့ မအလရဲ့ လူသတ်ဝါဒကိုဘဲ ကျုံတွေ့နေရပါတယ်။ မအလဟာ သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင် ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုတောင် သတ်ဖို့ ဝန်လေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ မအလနဲ့ စစ်အာဏာရူးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် သူတို့ရဲ့ အာဏာတည်တံ့အောင် ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်နေတာကို လက်မခံကြပါနဲ့တော့။ ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဘို့အတွက်၊ လူတိုင်းမုံးတီးတဲ့ စစ်တပ်ကနေ CDM မှာ တပ်ရင်းလိုက်တပ်မလိုက် ဝင်လာကြပါတော့။ နောင်ကြီးတို့ကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရင်ဖွင့်ပြီး ကြိုဆိုနေပါတယ်။
Jack Heinz says:
2021-05-29 at 4:23 PM
Go and get it! Freedom is for all beings.
2021-06-04 at 12:18 AM
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တဲ့သူတို့တောင် ပုန်းခို ပီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာ နေနေရတဲ့ ခွေးZ တွေက ပြည်သူနဲ့ ပေါ်တင်လည်းမနေရဲ ပြည်သူနဲ့ လည်းတရားဝင်မတွေ့ရဲတဲ့ အဖြတ်သမားတွေ သင်းတန်းဆင်းပီးရင် ပြည်သူသတ်တာ မခံရအောင် ကို့ကိုယ်ကို အရင်ကာကွယ်လိုက်ဦး..ရည်မွန်…ဦးထည့်ခေါ်ရင် မတန်လို့……
PyuKhit Burmese says:
2021-06-05 at 6:20 AM
We want background music please.
2021-06-13 at 6:28 PM
ကာကြယ္​​ေရးဝန္​ႀကီး ဟ.ဟ. က်ိဳက္​ထီးရိုးဝါး​ေသနတ္​ပစ္​တတ္​ပါရဲ႕လား။
SYN Channel says:
2021-06-14 at 4:11 PM